Ciyaartoyda Kubadda Cagta Oceania - Sheekooyinka Carruurnimada iyo Xaqiiqooyinka Taariikh nololeed aan la qorin
Home CARRUURTA OTAANIA FOOTBALL
Ciyaartoyda xirfadlayaasha ah ee ka socda Australia, New Zealand iyo dalal kale oo ka tirsan Oceania dhammaantood waxay heleen sheekooyin Carruurnimo oo ay ka buuxaan wakhtiyo badan oo aan la ilaawi karin oo xiiso iyo xamaasad leh labadaba. Ujeedada LifeBoger waa in loo sheego sheekooyinkan iyo sidoo kale xaqiiqda Taariikh nololeed ee Kubadda Cagta Oceania.
Waa maxay sababta sheekooyinka carruurnimada ee Ciyaartoyda Kubadda Cagta Oceania?
Sanadihii la soo dhaafay, kooxdeena waxay ku arkeen farqiga aqoonta oo balaaran shabakada aduunka oo dhan. Waa midda la xiriirta la'aanta la'aanta ku filan oo ku saabsan noloshii hore ee Kubadda Cagta Oceania.
Si loo soo afjaro farqiga noocan ah, LifeBogger wuxuu go'aansaday inuu jiro, sidaas darteed sameynta Qeybtaan Oceania. Qeybtaan waxay ujeedadeedu tahay inay soo gudbiso Sheekooyinka Carruurnimada iyo Xaqiiqooyinka Taariikh nololeed ee Ciyaartoyda Kubadda Cagta Oceania.
Ku Saabsan Agabkeena Kubadda Cagta Oceania
Sida laga yaabo inaad u badan tahay inaad soo aragtay, dhammaan qodobbadayada ayaa ilaaliya cinwaanno isku dhow iyo qulqulka macquulka ah ee nuxurka. Qodobbada soosocda ayaa kaa caawin doona inaad fahamto waxyaabaha ka kooban Oceania.
Marka ugu horreysa, waxaan kuu soo qaadaneynnaa sheekooyin carruurnimo aad u wanaagsan oo kubbadda cagta Oceania ah. Sheekadani waxay ka bilaabmaysaa wakhtiga dhalashadooda, taasoo kaa dhigaysa inaad fahanto waayo-aragnimadooda nololeed ee hore.
Waxaan sidoo kale kuu soo qaadaneynaa macluumaad ku saabsan asalka qoyska ee Kubadda Cagta Oceania.
Marka saddexaad, waxaan kuu sheegaynaa waxqabadyadoodii Noloshooda Hore iyo waaya aragnimadii ay ku lahayd kubada cagta Oceania, waana midda keentay inay gartaan wicitaankooda kubadeed.
Sheekadu waxay sii sii wadataa dhacdooyinka sanadaha hore ee shaqadooda.
Tan xigta waa Wadadayada Sheekada Fanka. Halkan, waxaan kuu sheegeynaa waxa kubbada cagta Oceania ay sameeyeen taas oo ka dhigtay inay ka dhabeeyaan inay ku guuleysan doonaan xirfadahooda.
Our Rise to Fame Story ayaa sii sharraxaysa sheekooyinka Guusha ee ciyaartoydii kubbadda cagta Oceania, sidoo kale, heerka ay haatan caan ku yihiin.
Ta ku xigta waa Sheekada Jacaylka. Waxaan sii wadaynaa inaan idin kula socodsiinno wixii ku saabsan saaxiibbada iyo naagaha Kubadda Cagta Oceania.
Marka xigta, waa xaqiiqooyin ku saabsan Nolosha Shakhsiyeed ee Ciyaartoyda Kubadda Cagta Oceania.
LifeBogger waxay kaloo sii ogaaneysaa inaad la xiriirto xubnaha qoysaskooda, iyo sidoo kale sida ay ula xiriiraan xubnaha qoyska iyo qaraabada.
Tan xigta waa Xaqiiqooyinka Nolosha oo aan kuu sheegayno sida Ciyaartoyda Kubbadda Cagta Oceania ay u kharash gareeyaan lacagaha, Networth iyo Daqliga.
Ugu dambeyntiina, waxaan kuu soo qaadan doonaa dhowr Xaqiiqooyin Udinld oo aadan waligaa ogayn oo ku saabsan kubbadda cagta Oceania.
Isku soo wada duuboo, waxaan aaminsanahay inaan sameynay baahida loo qabo, taas oo ah, bixinta Qeybaha xakameynaya farqiga u dhexeeya Kubadda Cagta Oceania. Sheekooyinka Carruurnimada iyo Xaqiiqda Taariikh nololeedka. LifeBogger wuxuu aaminsan yahay in Taageerayaasha Kubbadda Cagta ay marin u heli karaan sheekooyinka ku saabsan ciyaartoydooda ay taageerayaan.
In kasta oo aan ku dadaalno saxnaan iyo caddaalad, Nala soo xiriir haddii aad aragto wax aan qummanayn mid ka mid ah maqaalkeenna.
Bal eeg, liiskayaga sheekooyinka ee Ciyaartooyda Kubadda Cagta Oceania ee firfircoon iyo kuwa hawlgab ahba.
Muuji - Taariikhda wax laga beddelay: Sebtember 26, 2020